Ongororo yeRopa Michato naFederico García Lorca | Zvazvino Zvinyorwa
Kudzokorora kweRopa Michato naFederico García Lorca
Alberto Makumbo | | Vanyori, Type, Mabhuku, Literature, Theater
Musi waChikumi 22, 1928, kuCortijo de Fraile de Níjar, mune yazvino Cabo de Gata Natural Park muAlmería, chiitiko chinotyisa chakaitika. Zvikurukuru, muchato wakapedza dambudziko apo mwenga akafunga kutiza nemurume waaidanana naye chaizvo. Chiitiko chaicho chingafuridzire rimwe remabasa emhando yeFederico García Lorca: Ropa Muchato.
1 Zvinyorwa zveRopa Muchato
2 Ropa Muchato Vanhu
3 Ropa Muchato Symbology
4 Kuroora kweropa: Nhetembo dzechisimba
Zvinyorwa zveRopa Muchato
Mutaundi reAndalusia, munhu wese akagadzirira pemberera muchato unozivisa zvakavanzika uye kukakavara kwemhuri mbiri. Kune rimwe divi, mhuri yechikomba ine amai vakarasikirwa nemurume uye mumwe wevana vavo nekuda kwaFeliksi, uyo mwanakomana wake Leonardo achiri kudanana nemuroora.
Mamiriro ezvinhu anopisa muchato uyo, kunyangwe uchiitika, unoguma mune nhamo kana muroora afunga kutiza naLeonardo. Ndege iyo inounganidza guta rese, nechikomba sevanonyanya kutevera vaviri vacho musango.
Pakupedzisira, nyaya yacho inosvika pakupera kufa kweMuroori naLeonardo, vanopedzerana apo mwedzi wakarara kumusoro mudenga. Mwenga anopona, achiva iye mukuru anotambura rufu pamwe nemukadzi waLeonardo.
Kupera uku, kunozivikanwa kune vese, kunofunga kubuda kwenyaya inoenda mu crescendo, izere nezvese ngano dzeAndalusia dzakadururwa naLorca munzvimbo yenyasha. Zvinhu zvinogara zvichingoitika pamwe nekurudziro yakazvarwa nekutepfenyurwa yakaburitsa nyaya yaFrancisca Cañadas, uyo humwe husiku muna Chikunguru 1928 akatiza nehama yake Francisco Montes, rudo rwehupenyu hwake, kubva kumuchato achangopembererwa nemukomana wake, Casimiro, uyo mhuri yake yakaedza kumuroora kuti roora rake riwire zvakanaka.
Ropa Muchato Vanhu
Ropa Muchato rinoumbwa neanotevera makuru uye echipiri mavara:
Mukomana: Kunyangwe aine hunyengeri, iye murume ane rudo, saka haagone kutakura pfungwa yekuona chikomba chake chiri mumaoko eumwe murume. Kwaari, kuda kwake mwenga kunoratidzira tsananguro yerudo rwechokwadi.
Musikana: Anoshushikana uye achizeza, anodhonza mazana ezvinetso muchikamu chekutanga chemutambo kusvikira kushushikana kwake kwaputika mushure memuchato. Ndiye protagonist akazara webasa (sekusimbiswa nekuchinjika kuchangobva kuitika, Mwenga) uye anozvidzivirira mumasimba ezvisikwa sechikonzero chekutiza kutiza kwake.
Leonardo: Iyo yechitatu kona yeatatu ndiyo hama yemwenga, waanodanana naye zvakanyanya. Akaroorwa nehama yemurume mukuru, anoona chishuwo chake chichiwedzera sezvo nyaya ichienderera mberi kusvika afunga zvekutiza naye. Asina hunhu, ane shungu uye anopikisa hunhu hwemutambo.
Amai: Semunyori wemumvuri, amai vechikomba ndivo vanoona nezvekuzadza nzvimbo dzese muchirongwa neruzivo zvinoita kuti zvive nyore kunzwisisa vamwe vatambi nezviito zvavo.
Mudzimai waLeonardo: Iye anoziva nezve manzwiro emurume wake kumuroora, panguva imwechete iyo, pamwe chete navamwene vake, anofungidzira dambudziko richaitika pakupera kwemutambo.
Ropa Muchato Symbology
MuRopa Michato, zviratidzo zvakawanda zvakambokosheswa mubasa raLorca zvinoitawo sevanyori uye vafambisi venyaya yacho:
Mwedzi: Yakasarudzika Lorca, mwedzi unowanzo sunganidzwa nerufu, kunyangwe muMichato Yeropa inoshandawo sevhasi yekuchena uye kuratidzwa kweropa nemhirizhonga inotsanangura nhoroondo.
Bhiza: Inomiririra humhare uye hunhu.
Mupemhi: Akapfeka girini, anoonekwa muchikamu chekupedzisira chemutambo achiperekedza Mwenga kunzvimbo yake yekupedzisira. Inomiririra rufu.
Kuroora kweropa: Nhetembo dzechisimba
Cortijo del Fraile, kuisa iyo yakafuridzira Bodas de Sangre. Mufananidzo naJulen Iturbe.
Ropa Muchato rakazvarwa kuburikidza neshoko rambotaurwa repepanhau iro rakarondedzera zviitiko zvakaitika muNijar muna 1928, kunyanya rimwe rakaburitswa neDiario de Málaga yakanzi "Izvo zvishuwo zvemukadzi zvinokonzeresa kukura kwedambudziko reropa umo rinotorera murume hupenyu hwake ". Zvakanga zvakaita seizvi Lorca akafunga kutora nhoroondo sedambudziko, mhando iyo yakazobatawo semidzi iri pachena kwazvo yemitambo.
Mushure memwedzi yekunyora, pakupedzisira munaKurume 8, 1933 Bodas de sangre yakatanga kuratidzwa paBeatriz Theatre muMadrid, ichiva budiriro yakadaro Yaive yega yekutamba naLorca yakaburitswa mubhuku muna 1935 neimba yekutsikisa El Arbol pasi pezita rekuti Kuroora kweropa: Njodzi mumabasa matatu nekota nomwe.
Ose ari mune ayo emitambo uye ezvinyorwa zvinyorwa, Ropa Muchato rinoratidzwa mukati zviito zvitatu zvakasiyana, ayo anoumbwa nemafuremu akasiyana (yekutanga kuita matatu, nepo chiitiko chechipiri nechechitatu chakakamurwa kuva mafuremu maviri). Chimiro chinobvumira kuwanda kwakanyanya mukutaurisa, panguva imwe chete icho chinopa fungidziro yakazara kunyaya.
Uye zvakare, iro basa raizove nyaya yemamwe akawanda akazotevera zvidimbu zvemitambo pamwe nekusiyana kwakasiyana kwemafirimu, pakati pavo iyo yakaendeswa kubhaisikopo muna 1938 nemusezi waLorca, Margarita Xirgu, semutambi mukuru, kana The Mwenga, akatanga muna 2015 pamwe Inma.Zvinodhura mune inotungamira basa.
Inofungidzirwa seimwe ye iwo mabasa makuru aFederico García Lorca, Kuroora kweropa ndiye mumiriri akanakisa pesvedzero yemunyori: chiitiko chemhuri senge yeAndalusi, yakanamirwa nechiratidzo chayo chinomiririra ramangwana rakavakirwa padambudziko, rudzi urwo Lorca achaburitsa pachiitiko makore matatu pamberi pehumhondi hwaizoitika. kutitorera isu yemashiripiti asingaperi yemumwe wevanyori vakakurumbira venhoroondo.
Ungade here kuverenga bhuku Bodas de sangre naFederico García Lorca? Unogona kuiwana pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Kudzokorora kweRopa Michato naFederico García Lorca
peak pal iyo inoverenga
Pindura kune ngano
Maitiro ekunyorera inoverengeka: iyo yakaiswa nyaya